Itoophiyaan qaama maallaqa saamame deebisiisu hundeessite - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan qaama maallaqa saamame deebisiisu hundeessite
22 Muddee 2019
Madda suuraa, Abbaa Alangaa Federaalaa
Abbaan Alangaa Federaalaa qabeenya Itoophiyaan waggoota darba saamamte biyyoota garaagaraatti dhokate deebisiisuuf waajira tokko hundeessee hojjechaa akka jiru beeksise.
Hoogganaan kominikeeshinii Abbaa Alangaa Federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu BBC'tti akka himanitti, waggoota darban malaammaltummaa olaanaadhaan Itoophiyaan qabeenya hedduu saamamu qorannoowwan hedduun qo'atamee mirkaneessineerraa jedhan.
Hanga maallaqa bifa garaagaraan uummatni fi mootummaan saamaman kana adda baasuuf hojiileen muraasni hafan jiru jedhanii, biyyoota maallaqni guddaan itti dhokafme kanaa waliin hariiroo dippiloomasii fi marii sadarkaa garaagaraatti gaggeeffameen waliigalteen gaariin uumamuus dubbatan.
Maallaqni Naayijeeriyaa hatame deebi'uuf
M/J Kinfee Daanyaw irratti iyyanni yakka dabalataan dhiyaate
''Biyyota maallaqni kun itti dhokafameera jedhamanii adda bahan hedduu isaanii waliin haala jedhamuu danda'amuun wal hubanna fi waliigalteen uumameera.''
Dabalataaniis dhaabbilee maallaqa seeraan ala biyya irraa saamame deebisisuu fi seera kanaa wajjiin walqabatee jiru irratti hojjetan waliinis mariin gaggeefamaa jiraa jedhan.
''Adeemsa seeraa idila addunyaa akkaataa deebisiisa maallaqaafi shakkamtooota seeratti dhiyeessuu wajjiin jirurratti hojiin hafuu waan jiruuf irratti hojjetamaa jira'' jedhaniiru.
Maallaqni uummataa kun karaa adda addaa biyyaa akka bahu ta'ee deebi'ee biyya keessatti yakka garaagaraaf oolaa akka jiruufi ,kaaniis karaa seera qabeessa fakkaatuun biyyatti akka deebi'u ta'ee fayidaa namoota dhuunfaaf akka oolu jiruus obbo Zinaabuun dubbataniiru.
Ji'oota darban hojiin namoota maallaqa mootummaa saaman kanaa adda baasuuuf hojjetamaa akka ture himanii kanneen hooggansa mootummaa sadarkaa garaagaraarra jiran keessatti hirmaachuu akeekaniiru.
Eenyummaan isaanii adeemsa ititi aanee deemamu irratti danqaa akka hin taaneef jedha kan hin ibsamne ta'uus obbo Zinaabuun dubbataniiru.
Meejar Jenaraal Kinfee Daanyaw Tigraayitti to'annoo jala oolan
MM Abiy Ahimad waltajjiiwwan garaagaraa irratti maallqani Itoophiyan waggoota darbee keessa saamamte hedduu deebisuufu mootummoota waliin dudubbachaa akka jiran dubbachaa turaniiru.
Akka obbo Zinaabuun jedhanitti, mootummaan Abiy Ahimad ejjennoo cimaa malaammaltummaa ittisuurrattii qabataniin maallaqa saamame kana deebisuusuuf murannoo cimaafi sadarkaa abdachiisaarra gahameera.
Hojii kana bifa qindaa'een milkeessuuf tarsiimoo haaraan qophaa'uufi Abbaa Alangaa Federaalaa jalatti Daayireektooreetiin tokko hojii kana qofa hojjetu hundaa'ee hojii eegaluus dabalanii nutti himaniiru.
Odeeffannoowwan mootummaan duula maallaqa saamame deebisuu eegaaluu kun qabeenyi saamameefi saamtotni akka hin baqanne carraa hin kennuu ?gaaffii jedhu yoo deebisan ''eenyummaan isaanii fi eessa akka dhoksan hedduun isaa waan beekameef hordofamaa jiruu'' jedhan.
Dhaabbata saamamuu qabeenya mootummaa akkasumas,'money laundaring' ittisuurratti imaammata qopheessuun kan beekamu Financial Action Task Force, murannoo mootummaa kanaan Itoophiyaa biyyoota maallaqni jalaa saamamuudha jedhee tarreesse keessaa akka baatu godheeraa jedhan obbo Zinaabuun.
Duula farra malaammaltummaa gaggeessaa jiruunis ji'oota shan darban keessa maallaqa callaa birrii miiliyoona 50 kaazinaa mootummaattii deebisuun akka danda'amees Abbaan Alangaa Federaalaa beeksiseera.
'Hanna Abaachaa': Siwiizerlaandi $320m Naayijeeriyaaf deebisuufi
6 Muddee 2017
Meejar Jenaraal Kinfee Daanyaw to'annoo jala oolanii Finfinnee dhufaa jiru
13 Sadaasa 2018
Oolmaa Dhaddachaa: M/J Kinfee Daanyaw irratti iyyanni yakka dabalataan dhiyaate
3 Muddee 2018
EU fi US haleellaa xiyyaaraa Tigraayitti raawwate jedhame 'cimsanii balaaleeffatan'
Sa'aatii 8 dura
Itoophiyaan haleellaa xiyyaaraa Tigiraayitti raawwate jechuun US fi EU balaaleffataniif deebii kennite
Daqiiqaa 31 dura
Lammiilee Saawudiitti 'rakkachaa jiran hunda yeroo gabaabaatti gara biyyaa deebisna'
Viidiyoo, 'Rakkoon nageenyaa kan jiru Facebook fi miidiyaarra' - Shimallis Abdiisaa, Turtii 3,06
22 Waxabajjii 2021
Abbaan alangaa iyyannoo mirga wabii Mohaammad Deksiisoo irratti maal jedhe?
Masriin dhimma hidha Abbayyaarratti Afriikaarraa michoota haaraa barbaadaa jirti
Boordiin filannoo 'iyyati dhiyeeffadhe deebii hin argatu taanaan mana murtiin dhaqa' EZEMA
Oduun haati Afrikaa Kibbaa daa'imman 10 deesse jedhu soba
Ameerikaan waa'ee lammiishee Finfinneetti du'e jedhameerratti maal jette?
Filannoo Itoophiyaan 'taateewwan yaaddessoo 300 ol mirkaneeffanneerra'
'Waggaa lama hidhamanii bilisa jedhamuun naaf hin galu' -Yaasoo Kabbabaa
Mucaa badee ture gazexessaa dhimmasaa gabaasuuf dhaqeen argame